Iindaba - Ulwazi loShishino
Ukuveliswa komphezulu onganyangekiyo umhlwa kwingingqi yemiphezulu edibene negesi eshushu yokubilisa ibhoyila yentsimbi, iinxalenye ezihambelanayo zesikhunta sokuphosa ziphathwa ngesitya esimnyama esine-alloying element, ngakumbi i-40- I-50% yeferrosilicon, eguqula umda wommandla wentsimbi engekenziwa yomelele kwisikhumba esikhupha umhlwa.
Isidingo solawulo lwezixhobo ezingafunekiyo sibalulekile kwimpumelelo yokuphosa imveliso ye-iron kwiinkqubo zemifuno. Isanti yesanti yesanti ihlala ihoywa kugxilwe ikakhulu kwizongezo ze-bentonite. Izongezo zeCarbonaceous zingathathelwa ingqalelo njengobubi obuyimfuneko ukuqinisekisa umphezulu womhlaba ogqityiweyo kunye nokuncitshiswa kweziphene zomphezulu ezinxulumene nomhlaba. Ezinye izongezo zisetyenziswa xa iisistim ziphuma kwibhalansi kwaye zona zona zongeza ngakumbi kubunzima benkqubo yemifuno kunye neenkqubo. Ekuphosweni okufuna ii-cores oku iba ngumcimbi omkhulu njengoko iinkqubo ezininzi zentlaka zisetyenziselwa imveliso engundoqo kwaye ezi kufuneka zithathelwe ingqalelo xa kulawulwa amanqanaba ecarbonaceous kunye nokuhlelwa ngokubanzi kwenkqubo yesanti.
Iziphumo ezingamawele kwikhabhoni eyongezelelweyo kunye nelahleko-ekubanjweni kunye nokubekwa kwisanti ngokubanzi kufuna ukuqonda ngononophelo kunye nolawulo. Iindlela ezahlukeneyo zolawulo ziyavavanywa kubandakanya neendlela zesintu ezinje ngee volatiles kunye nelahleko-yokutshaya kunye neendlela zokumisela ze-bentonite kunye neendlela zokuhlela. Iindlela ezintsha zokulawula ezinjengekhabhoni iyonke iphononongwa kunye nepakeji yovavanyo kunye neendlela zolawulo.
Iindlela ezahlukeneyo zokuqikelela zijongwa njengenxalenye yolawulo ngokunjalo. Umgangatho wezongezo kunye nendima yabo kwaye okona kubaluleke kakhulu kukunxibelelana kwabo kugqityiwe, kuba le yindawo ehlala ihoywa njengamadoda okulwa alwela impumelelo kwimidlalo engaguquguqukiyo yomgangatho. Ukuvavanywa kolawulo lovavanyo oluzayo kuxoxwa ngokudibeneyo ukongezwa kumxube.
Kuphononongwe kwakhona ukutolikwa kweziphumo kunye nesenzo esifunekayo ukuqinisekisa ulawulo kunye nokubaluleke ngakumbi okungaguquguqukiyo komgangatho wokuphoswa kwezinto ezivela kwimifuno kunye neenkqubo kugxininiso ekuqondeni nasekulawuleni isongezo se-carbonaceous ekusebenzeni.
Ixesha Post: Nov-20-2020